CABDIRASHIID JANAN OO BERRI BELED XAAWO LAGU SOODHAWEYNAYO – Radio Daljir
Maarso 23, 2021 3:28 g 0
Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ‘Janan’ oo ah wasiirka amniga maamulka Jubbaland ayaa la filayaa berri oo Arbaco ah in lagu soodhaweeyo degmada Beledxaawo ee gobolka Gedo.
Madax dawladda dhexe ee federaalka ah, saraakiil ciidan iyo masuuliyiin heer gobol ah ayaa gaaray degmeda Beledxaawo si ay u soo dhaweeyaan wasiir Janan iyo waftigiisa oo berri ku soo wajahan halkaasi.
Imaanshaha Cabdirashiid Janan, ayaa timid kadib markii madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Cabdirashiid Janan ay gaareen isfaham siyaasadeed oo hordhac ah, kaasoo mirodhalkiisa bilawga ah uu keenay wadahadal muddo socday oo qaddiyaddaasi xal looga gaarayey.
Cabdirashiid Janan iyo ciidan uu wato, ayaa muddo sannad ka badan ku sugnaa deegaannada xudduudda ah ee Soomaaliya iyo Kenaya, kadib markii ciidamada dawladda federaalka fariisimo ka samaysteen badanka degmooyinka gobolka Gedo iska hor-imaadana ay dhaceen, taasoo ka bixiddiisa Gedo sal u ahayd.
Weli si rasmi ah looma caddayn nooca isfaham ee ay gaareen dawladda dhexe iyo Wasiirka Amniga Jubbland ee muddada bannaanjoogga ahaa Cabdirashiid Janan, lamana hubo isbadddelka uu dhalin doono is afgaradkaasi marka lagu cabbiro xaalkii ka dhextaagnaa dawladda federaalka iyo Jubbaland.